Jennifer Lopez, Victoria Beckham… maneho fitiavan-janaka amin’ny fomba hafahafa
1. Ho an’i Jennifer Lopez izao, dia tsy nalefany any an-tsekoly i Emme sy Maximilian, zanany. Tsapany fa tsy mitovy amin’ny fiainan’ny zaza rehetra ny an’ireo zanany ireo, ka dia ampihantainy tokoa. Any anaty fiaramanidina manokana mpitondra azy ireo, ohatra, dia misy toerana filalaovana nitentina 50.000 dolara ny nanamboarana azy.
2. Mirehareha amin’ny fianakaviany tokoa i Heidi Klum. Fahasambarana ny fananany ireo zanany 4, hany ka tsy foiny mihitsy. Rehefa manety ny volon’ ireo zanany lahy izy dia tehiriziny ao anaty harona plastika kely iny volo iny. Amporisihiny ireo zanany hanao ny sariny ary hametaka ireo volo ireo eo amin’ny lohan’izay sary vitany.
3. Manan-janaka 4 ihany koa i Victoria Beckham, kaa iray ihany no vavy. Tsy misy mahazo manosotra “maquillage” eo anoloan’io zanany io mihitsy. Mbola kely loatra mantsy i Harper, araka ny heviny ka sao dia lasa maka tahaka an’izany.
4. Miaina toa an’i Kim Kardashian mihitsy kosa i North, zanany vavy. Mandany vola be mantsy i Kim Kardashian mba hikarakarana ity zanany ity. Mamoaka 5.000 dolara isam-bolana izy, ho an’ny “manucure” an’i North. Misy mpanao volo manokana koa mikarakara ny volony ary ny fitoeran’akanjony dia mihoatra ny iray tapitrisa dôlara ny sandany, sady manana “styliste” ihany koa i North.